Ukwenqatshwa komsebenzi | Law & More B.V.
Blog » Ukwenqatshwa komsebenzi
Kuyacasula kakhulu uma imiyalo yakho ingalandelwa ngumsebenzi wakho. Isibonelo, isisebenzi esisodwa ongeke uthembele kuso ukuthi sizovela endaweni yokusebenza ngempelasonto noma lowo ocabanga ukuthi ikhodi yakho yokugqoka icocekile ayisebenzi kuye. Uma lokhu kwenzeka kaninginingi kungakhungathekisa kakhulu. Ngenhlanhla, umthetho unikeza isisombululo salokhu. Ezimweni zombili, nakwabanye abaningi, ungahle unqatshelwe umsebenzi. Kule ndatshana sichaza ukuthi kunini futhi kunjani ongakwenza ngakho njengomqashi. Okokuqala sizongena kuziphi iziyalezo ongazinikeza wena, njengomqashi. Okulandelayo, sizoxoxa ngokuthi imiphi imiyalo isisebenzi esingayenqaba nokuthi ngakolunye uhlangothi, ezoholela ekwenqabeni umsebenzi. Ekugcineni, sizoxoxa ngokuthi yiziphi izinketho onazo njengomqashi zokubhekana nokwenqatshwa komsebenzi.
Yimiphi imiyalo ovunyelwe ukuyinikeza njengomqashi?
Njengomqashi, unelungelo lokuyalela ukukhuthaza umsebenzi ukuthi asebenze. Ngokomthetho, isisebenzi sakho kufanele silandele le miyalo. Lokhu kulandela ubudlelwano begunya phakathi kwesisebenzi nomqashi ngokwesivumelwano sokuqashwa. Leli lungelo lokufundiswa lisebenza zombili emithethweni emayelana nomsebenzi (isb. Imisebenzi yokusebenza kanye nemithetho yezingubo) kanye nokukhuthaza ukuhleleka okuhle enkampanini (isb. Amahora okusebenza, amazinga wokuziphatha kanye nezitatimende ezinkundleni zokuxhumana). Isisebenzi sakho siphoqelekile ukulandela le miyalo, noma ngabe ingabonakali kumagama esivumelwano sokuqashwa. Uma ehluleka ukwenza njalo futhi ephikelela enza kanjalo, kuyicala lokwenqatshwa komsebenzi. Noma kunjalo, kusebenza ama-nuances amaningi, achazwe ngezansi.
Isabelo esivela kuwe njengomqashi akudingeki silandelwe uma singenangqondo. Ukunikezwa kunengqondo uma kungabonakala njengengxenye yesivumelwano sokuqashwa ngokomongo wokuba isisebenzi esihle. Isibonelo, isicelo sokusebenza isikhathi esithe xaxa esitolo ngesikhathi esimatasa sikaKhisimusi kungaba yisabelo esizwakalayo, kepha hhayi uma siholela esontweni lokusebenza elingaphezu kwamahora angama-48 (okungaphezu kwalokho, okungekho emthethweni ngenxa yesigatshana seSigaba 24 1 woMthetho Wezabasebenzi). Ukuthi ukwabiwa kunengqondo yini ngakho-ke ukwenqatshwa komsebenzi kuya ngezimo zecala kanye nezintshisekelo ezihilelekile. Ukuphikisa komsebenzi kanye nezizathu zomqashi zokunikeza isabelo kumele kubhekelwe. Uma kungathathwa ngokuthi umsebenzi unesizathu esiphuthumayo sokwenqaba isabelo, akukho mbuzo wokwenqatshwa komsebenzi.
Ukuchitshiyelwa kwezimo zokusebenza okukodwa
Ngaphezu kwalokho, umqashi akanakushintsha unilaterally izimo zokusebenza. Isibonelo, umholo noma indawo yokusebenza. Noma yiziphi izinguquko kufanele zenziwe njalo ngokubonisana nomsebenzi. Okuhlukile kulokhu ukuthi kwezinye izimo kuvunyelwe uma kufakwa esivumelwaneni sokuqashwa noma uma wena, njengomqashi, unentshisekelo enkulu yokwenza lokho. Uma unemibuzo mayelana nalokhu, thina ku Law & More zilungele ukukuphendulela zona.
Umsebenzi angayenqaba nini imiyalelo yakho?
Ngaphezu kweqiniso lokuthi isisebenzi singenqaba isabelo esingenangqondo futhi, ngaphezu kwalokho, kungenzeka singashintshi isimo sokusebenza ngokungahambisani, kukhona nezibopho ezingeziwe ezivela ezimfunekweni zesimo esihle somsebenzi nesomqashi. Lokhu kubandakanya amazinga ezempilo nokuphepha. Isibonelo, umsebenzi kufanele acabangele isimo somzimba sabasebenzi uma kwenzeka bekhulelwe noma bengakwazi ukusebenza, isibonelo. Isisebenzi asikwazi ukucela umsebenzi ukuthi alandele imiyalelo ebeka impilo yakhe engcupheni futhi kumele aqinisekise nezimo zokusebenza eziphephile. Ukwenqaba ngenxa kanembeza nakho kufanele kubhekelwe, inqobo nje uma umsebenzi ungenziwa ngendlela efanele.
Uma imiyalo yakho ihambisana namazinga achazwe ngenhla futhi umsebenzi eqhubeka nokuwenqaba ngendlela ephikelelayo, lokhu kusho ukwenqatshwa komsebenzi. Kunamacala athile ajwayelekile lapho umbuzo uthi ngabe kukhona ukwenqatshwa komsebenzi. Isibonelo, uma kwenzeka kungabi namandla okwenza umsebenzi, (ukugula) ukungabikho noma umsebenzi ongafisi ukwenza imisebenzi efanelekile ngoba nje bengaphandle kwemisebenzi yakhe ejwayelekile. Ukuthi kukhona ukwenqatshwa komsebenzi kuxhomeke kakhulu ezimweni zecala nokuphikisa kwesisebenzi sakho, ngakho-ke kuwukuhlakanipha ukuthi uqaphele futhi ufune iseluleko sezomthetho uma kunesidingo. Lokhu ngokuqinisekile kuyasebenza uma ucabanga ngezinyathelo zokulandelela. Ngaphezu kwalokho, uma ungabaza ukuthi empeleni kukhona ukungakwazi ukusebenza uma umsebenzi wakho enqaba ukusebenza ngenxa yalesi sizathu, kubalulekile ngaso sonke isikhathi ukulinda umbono kadokotela wezempilo nokuphepha emsebenzini noma udokotela wenkampani. Amanye amacala empeleni angamacala acace bha okwenqatshwa komsebenzi. Isibonelo, uma, ngesikhathi sabasebenzi abangaphansi, unikeze umsebenzi wakho imvume yokuthatha ikhefu uma etholwa amaklayenti, kodwa yena bese eye eholidini endaweni ekude futhi engatholakali nhlobo.
Imiphumela yokwenqatshwa komsebenzi
Uma umsebenzi wakho enqaba umsebenzi wakhe, wena njengomqashi ngokwemvelo ufuna ukungenelela ngokushesha okukhulu ukuze ugcine igunya lakho. Kubalulekile ukuthatha izinyathelo ezifanele kuleli cala. Ungabeka isenzo sokuqondiswa kwezigwegwe kumqashwa. Lokhu kungafaka ukukhipha isexwayiso esisemthethweni noma imali ebanjwayo yamahora okusebenza enqatshiwe. Uma kwenzeka ukwenqatshwa kaninginingi ukusebenza, kungenzeka uthathe izinyathelo ezifinyelela kude ezinjenge ukuxoshwa noma isifinyezo ukuxoshwa. Ngokomthetho, ukwenqaba ukuqashwa kuyisizathu esiphuthumayo sokuxoshwa.
Njengoba ufunde ngenhla, umbuzo wokuthi kunqatshwa nini emsebenzini nokuthi yiziphi izinyathelo ezifanele ezingathathwa kulokhu kuxhomeke kakhulu ezimweni eziqinile nezivumelwano ezenziwe phakathi komqashi nomsebenzi. Ngabe unemibuzo ngalokhu? Sicela uxhumane Law & More. Ithimba lethu elikhethekile lisebenzisa indlela yomuntu siqu. Sobabili nawe sizohlola amathuba akho. Ngesisekelo salokhu kuhlaziywa, sizojabula ukukucebisa ngezinyathelo ezilandelayo ezifanele. Uma lokhu kungadingeka, sizokunikeza izeluleko nosizo ngenkathi kwenziwa inqubo.
Thumela Previous I-Alimony
Post Next Umthetho wokwesula emsebenzini